Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziyiFiji » IFiji inyanzela ukuvulwa kwakhona kwezokhenketho ngoDisemba wama-2021
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Iindaba eziyiFiji • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Ugonyo ngalunye luzisa iFiji inyathelo elinye kufutshane nokuba nako ukwamkela iindwendwe zamanye amazwe kwezi ziqithi kwakhona.
Ngaphezulu kwama-92% abantu ekujoliswe kubo eFiji bafumana idosi yokuqala yokugonya i-COVID-19.
Ezokhenketho iFiji isungula inyathelo elitsha ekukhuthazeni ukugonywa.
Icandelo lezokhenketho laseFiji lamkele ngokubanzi ukuzibophelela kweFiji.
Ngaphezulu kwe-92% yabemi ekujoliswe kubo abafumana idosi yabo yokuqala yokugonya i-COVID-19 kwaye ngaphezulu kwe-41% ngoku kugonywe ngokupheleleyo, iFiji yenza inkqubela phambili ebonakalayo kwinjongo yayo yokuvula kwakhona ngoDisemba 2021, njengoko ugonyo ngalunye luzisa iFiji inyathelo elinye kufutshane nokuba bakwazi ukwamkela iindwendwe zamanye amazwe kwezi ziqithi kwakhona.
“Sikwindlela enqamlezileyo yobudala obutsha bokuhamba nokhenketho apho ukuphinda kuhanjwe khona kukhenketho lwamazwe ngamazwe kuphinjwe ngembumbulu yesilivere-isitofu sokugonya se-COVID-19,” utshilo uMphathiswa wezoRhwebo, ezoRhwebo, uKhenketho noThutho, u-Hon. UFaiyaz Koya. "Ukugonya abantu ekujoliswe kubo akuqinisekisi nje ukuba sigcina uluntu lwethu lukhuselekile, kodwa sikulungele ukwamkela umhlaba ubuyele kunxweme lwethu kwaye sibuyisele abantu baseFiji kwimisebenzi abayithandayo."
Njengenxalenye yamalungiselelo okuvula kwakhona iFiji, Ezokhenketho iFiji isungule inyathelo elitsha lasekuhlaleni lokukhuthaza bonke abantu baseFiji ukuba bagonywe kwaye bakulungele ukuhamba kwakhona xa kuthintelwa izithintelo. Umyalezo olula, kodwa obalulekileyo: “Yeyona nto siyenzayo xa sihamba: gonyo kwaye uzilungiselele.” Eli phulo lijoyina umyalezo wezoKhenketho e-Australia lokwabelana ngenkxaso kunye nenkuthazo yokugonya iFiji iphela.
Ukuqinisekisa impilo kunye nokukhuseleka kwabahambi nabemi ekuvulweni kwakhona kwemida, i Icandelo lezokhenketho laseFiji yamkele ngokubanzi ukuzibophelela kweFiji; umgangatho ovunyiweyo we-WHO wezona ndlela zokuziqhelanisa nezempilo kunye nezokhuseleko ezenzelwe ukulungelelanisa umzi-mveliso neendlela zokuhamba ezikhuselekileyo kwilizwe lasemva kwe-COVID. Abasebenza kwezokhenketho basebenzela ukufezekisa i-100% lokugonya bonke abasebenzi abafanelekileyo kwaye baya kufumana isitampu sokugonya se-CFC 100% sakuba sigqityiwe. Ukuza kuthi ga ngoku, kukho iindawo ekuchithelwa kuzo iiFiji ezingama-46 eziye zafumana ugonyo lwe-100% lwabasebenzi.
Ukongeza, uKhenketho lweFiji eMntla Melika luphehlelele umkhankaso wentengiso, obizwa ngokuba yi "Fumana iBula Yakho" ukukhuthaza abathengi ukuba baqale ukuphupha kwaye bacwangcise uhambo lwabo olugqibeleleyo oluya eFiji. Eli phulo lijolise kwimibuzo yokunceda abahambi ukuba bafumane 'iBula' yabo kwaye bafumane iingcebiso zokuhamba ezihambelana nezinto abazithandayo. Eli phulo lidlala umbuliso waseFiji "bula" - igama elinentsingiselo ezininzi kubandakanya u-hello, ulonwabo, impilo entle kunye namandla obomi.